Mananika ny 74 000 ny maty 1 324 907 ny olona voamarina maneran-tany voamarina fa tratry ny coronavirus, raha ny antontan’isa voaray omaly tamin’ny 11ora alina.
73 703 ny maty, raha toa ka 275 832 kosa no efa sitrana. Efa tafiakatra 16523 ny isan’ny olona maty tany Italia izay mitana ny laharana voalohany, 132 547 no isan’ny olona voa, ary 22 837 kosa no efa sitrana tany an-toerana. Faharoa be maty indrindra I Espagne izay 13 169, ary manatombo kokoa amin’I Italie ny isan’ny olona voa, izay mahatratra 132 032, ary 40 437 kosa no sitrana. I Etazonia no ahitana olona voa be indrindra satria 351 890 izany, 10 377 ny efa maty tany amin-dry zareo bekintana, ary 18 940 no efa sitrana.
Olona 3898 ao amin’ny fameloman’aina
Taorian’ny fidinana roa andro nisesy tamin’ny olona maty ao anatin’ny iray andro, dia somary niakatra indray ny isa tany Italie. 636 no maty tao anatin’ny iray andro. Taorian’ny zoma lasa teo izay nananika 766 ny isan’ny maty dia nihena ho 525 ny alahady teo, saingy somary niakatra indray omaly alatsinainy. Olona 35 99 kosa no voamarina fa voa tao anatin’ny iray andro, izay voasokay ho isan’ny fitomboana kely indrindra nanomboka ny 17 martsa. Efa noresahina etsy ambony fa 132 547 ny voa hatramin’ny omaly, ka mahatratra 3898 no ao amin’ny fameloman’aina na ny “réanimation”. Nisy fihenany 79 io mitaha ny tamin’ny alahady, ary fihenany fanintelony nisesy.
439 ny maty tao anatin’ny iray andro
Handresy isika hoy ny mpanjaka Anglisy Elisabeth II ny alahady teo. Voatery niditra an-tsehatra nankahery ny vahoaka Anglisy izy manoloana ny fipariahan’ny covid-19 any an-toerana. Isan’ireo voa ary ao anatin’ny tsy fahasalamana sy voatery mihiboka mazava ho azy ny Praiminisitra Boris Johnson. Tsy misy ahiana ny ainy, hoy ny mpitondra teniny. Raha ny tatitra omaly alatsinainy dia nahatratra 439 ireo maty tao anatin’ny iray andro, mampiakatra ny isan’ny maty rehetra ho 5373. Mahatratra 51 608 kosa ny voa any amin’ity firenena ity.
Voan’ny coronavirus hatramin’ny biby
Tsy ny olombelona ihany fa hatramin’ny biby no voan’ny coronavirus any Etazonia. Tigra 4 taona antsoina hoe Nadia, ny rahavaviny Azul, ary tigra roa hafa mpifankatia sy liona telo fantatra amin’ny hoe Lion d’Afrique tao amin’ny valanjavaboaharin’i Bronx ao New York ireo voa, ka ny mpiambina ilay toerana izay tsy nahalala akory ny fitondrany ny covid-19 no voalaza fa namindra tamin’izy ireo. Nampijalian’ny koha-maina ireo biby saingy efa tsy misy ahiana ny ainy. Ahiana ny zava-doza bebe kokoa amin’ity herinandro ity satria vinavinaina ho betsaka noho ny raharaha sambo Pearl Harbor na ny raharaha 11 septambra ny faty olona.
442 ny maty rehetra
Miisa 442 ny olona maty rehetra ho an’ny Kaontinanta Afrikanina, ary 9457 ny olona voamarina fa mitondra ny Coronavirus hatramin’ny omaly. Firenena 51 no efa ahitana azy, ka I Afrika Atsimo, Algérie, ary Egypte no voa mafy indrindra. Ny firenen-dehibe dia maminavina, fa hatrany amin’ny 450 000 ny olona ho voa aty Afrika. Isan’ny adihevitra moa ny hoe hanaovana andrana vaksiny amin’ny Afrikanina, izay olo-malaza maro no nanda izany, tahaka an-dry Samuel Eto’o, Didier Drogba.
Dokotera namono tena fa voan’ny coronavirus
Maty namono tena ny Dokotera Bernard Gonzalez. Mpitsabo ny Klioba Stade de Reims, klioba baolina kitra diviziona voalohany any Frantsa, i Dr Bernard Gonzalez. Tsetsatsetsa tsy aritra no hilazana fa io no Kliova nilalaovan’ilay Malagasy Thomas Fontaine nialohan’ny nifindrany any amin’ny FC Lorient ilalaovany ankehitriny. Namono tena tao an-tranony moa ity dokotera ity, ary nametraka taratasy milaza fa misy ifandraisany amin’ny fitondrany ny tsimokaretina Coronavirus ny antony namonoany tena. Ankona tanteraka ny vadiny izay voan’ny Covid-19 ihany koa, sy ny klioba manoloana izao fahafatesana izao. 60 taona I Bernard Gonzalez izao maty izao.
Hiditra amin’ny hamehana anio…
Mihevitra ny hanao fanambarana hamehana na “Etat d’Urgence” ny Praiminisitra Japonais Shinzo Abe anio talata, raha ny fanambarany omaly. Any amin’ireo faritra hita fa tena mahazo vahana ny coronavirus no tena ho hentitra ny fepetra, toy ny any Tokyo, Osaka,… Nambaran’ity Praiminisitra ity ihany koa fa volabe 108 000 miliara yens (915 miliara euros) no haompana amin’ny drafi-panarenana ara-toekarana hiatrehana valanaretina ho an’ity firenena ao anatin’ny telo matanjaka indrindra ara-toekarena ity.